Isikhathi se-Popcorn: I-beta version 4.0 entsha yokubuka ama-movie nochungechunge online | Kusuka kuLinux
Isikhathi se-Popcorn: I-beta version 4.0 entsha yokubuka ama-movie nochungechunge online
Isikhathi se-Popcorn: Uhlobo olusha lwe-4.0 lokubuka ama-movie nochungechunge ku-inthanethi
Kulezi izikhathi zokuhlukaniswa kwezenhlalo zomhlaba wonke (ukujija, ukwahlukanisa), abaningi bethu abanoxhumano lwe-Inthanethi, baphoqeleke ukuba sisebenzise isikhathi sokupheqululaNoma kungukufunda, ukubhala, ukubhuloga, noma ukubukela nje okokufundisa, ukuthatha izifundo, ukudlala imidlalo, noma ukubukela okunye okuqukethwe kwe-multimedia online.
Futhi ngqo okwakamuva, abadali be Isikhathi se-Popcorn usanda kwethula i- inguqulo entsha ye-beta, i-4.0, kokuhle kwayo uhlelo lokusebenza lomthombo ovulekile.
Yebo, Isikhathi sePopcorn! Uhlelo lokusebenza lusasebenza futhi lubuyekezwe ukusivumela ukuthi siqhubeke nokusebenzisa okuhle kwakho platform ukusebenza kwawo okususelwa kunqubo ye- umthetho olandelwayo omuncu. Isikhathi se-Popcorn yisibonelo esihle sokuthi kanjani Isofthiwe yamahhala Mina i Umthombo ovulekile ingamane isebenzise ubuchwepheshe obutholakalayo ngokunekhono nangobuciko ukunikeza izixazululo ezisebenzayo zabaningi, ngezindleko ezingabizi noma zero. Yize kwabanye, Isikhathi se-Popcorn luhlobo lokunye okungokoqobo, yize kungenjalo ngokomthetho kakhulu noma kungagunyaziwe, ekusakazeni amapulatifomu afana ne- Netflix, isibonelo.
En KusukaLinux Akukhona okokuqala sikhuluma ngakho Isikhathi se-Popcorn. Okuthunyelwe kwethu kokugcina mayelana nakho bekuwucingo «Amathiphu wokufaka i-Popcorn Time, Spotify neTelegram ku-DEBIAN», lapho sichaza khona Isikhathi se-Popcorn like:
"Isikhathi se-Popcorn: Kuyisicelo esidlulisa (sikhiqize kabusha) futhi silande ama-movie, izinhlelo zethelevishini (uchungechunge) kanye nama-Animes (amaJapan Comics) online (nge-Intanethi) kusuka kumafayili wesifufula. Ukusetshenziswa kwayo kulula kakhulu, kuyalandwa, kuvulwe uziphu, kwenziwe, kukhethwe i-movie noma isiqephu, ikhwalithi yokudlalwa kanye nemibhalo engezansi efanelekayo iyakhethwa, ekugcineni chofoza ku-play futhi ujabulele".
Ukuze, sikumema ukuba uyifunde kamuva, ngokwesiko elijwayelekile.
1 Isikhathi se-Popcorn
Okwamanje, Isikhathi se-Popcorn unayo inguqulo ezinzile (3.0) futhi manje une- inguqulo entsha ye-beta (4.0), enezinye zezindaba, eyodwa evelele, okuyisaziso sakho ukuthi yethu Ikheli le-IP ukhona noma okungenzeka ukhona ukutholakala kwe-geo nokulandelwa (okubukiwe) ngu ISP noma uHulumeni, ngaphezu kwakho konke, ngohlobo lokuqukethwe okusetshenzisiwe. Kuyo, usimema ukuthi sisebenzise i- Inethiwekhi ye-VPN ukuvikela ukungaziwa kwethu kanye / noma ubumfihlo, okungenani, lapho usebenzisa i- Isikhathi se-Popcorn.
Ngaphandle kwalokho, inguqulo entsha isebenza ngokufana ncamashi neyangaphambilini, okungukuthi, iyayisebenzisa isikhombimsebenzisi esibonakalayo futhi esinobungane, okungukuthi, kucacile futhi kulula, kusukela ikhombisa okuqukethwe okuthrendayo (okufakiwe), ngokuzenzakalela, futhi kusivumela ukuthi siseshe okuqukethwe ngezihlungi ezihlelwe phezulu, ezihlukaniswe izigaba. Ngokuya ngekhwalithi kanye ne-bandwidth yomsebenzisi ngamunye, bangahlangabezana nokudlalwa okucishe kube khona kokuqukethwe ngakunye okubukwayo.
Uhlobo: Ama-movie, uchungechunge kanye ne-anime.
Hlunga nge: Izinto ezibukiwe, Isihloko, unyaka, nesilinganiso.
Ukuyilanda nokuyisebenzisa kulula kakhulu, kufanele nje siye kuyo Iwebhusayithi esemthethweni yePopcorn Time, vula uziphu, dala isinqamuleli kumenyu enkulu bese ugijima ukuqala buka okuqukethwe kwethu kwe-multimedia ku-intanethi okuncanyelwayo noma okufiswayo.
Ekugcineni, kuyaphawuleka ukuthi, Isikhathi se-Popcorn uhlelo lokusebenza ukuthi kulo lonke ukuba khona kwalo noma umlando wethule izinkinga eziningi, zombili ezisemthethweni yi okuqukethwe okunikezwayo okwephula i-copyright wezinkampani ezikhiqizayo, kanye nokuncintisana kwe- imizabalazo phakathi kwamaqembu entuthuko kwezicelo ezifanayo (izimfoloko).
Ngakho-ke okwamanje Isikhathi se-Popcorn, iyasebenza futhi ivuselelwe, kepha asazi ukuthi isikhathi esingakanani. Ngakho-ke, kufanelekile ukukusebenzisa futhi sikujabulele kulezi zikhathi ezinesizungu ekhaya, esizoba nazo ngenxa ye- Ubhubhane lwe-covid-19.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" mayelana nesicelo esihle esaziwa ngegama le- «Popcorn Time» kudalelwe abasebenzisi abaningi be-Intanethi abathanda ama-movie, uchungechunge lwe-TV kanye ne-anime, ingathola futhi ibuke okuqukethwe okushiwo ngefayela le- ipulatifomu esekwe kumthetho olandelwayo omuncu, yiba nentshisekelo nokusetshenziswa okuhle, kwayo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Isikhathi se-Popcorn: I-beta version 4.0 entsha yokubuka ama-movie nochungechunge online
Inguqulo ye-beta yeFedora 32 isivele ikhishiwe futhi lezi yizinguquko zayo